အဖုံးစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများပါ ၀ င်သည့် Multi-size ကြည်လင်ပြတ်သားသော Matte Frosted Glass Candle အိုး ဝင်း
1. ပေါက်ကွဲ / နှိပ်စက်, ကျယ်ပြန့်စားသောက်ဆိုင် / ဟိုတယ် / အိမ် / ပါတီစသည်တို့၌စသည်တို့ကို။
၂။ လိုဂိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောပုံစံ၊ ပုံစံ၊ အရွယ်အစားနှင့်အရောင်စသည်တို့ကိုသင်၏ပုံများအရပြုလုပ်နိုင်သည်။
3. Eco-Friendly နှင့်အဆိပ်မရှိသောအစားအစာဘေးကင်းသည့်ဖန်ခွက်ကိုယ်ခန္ဓာ။ ၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ BPA၊ ခဲ၊ ကဒ်မီယမ်နှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောအရာများမပါ ၀ င်ပါ။ လုံခြုံပြီးကြံ့ခိုင်သောပို့ကုန်ထုပ်ပိုးခြင်းသည်လုံခြုံမှုကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသည်။
အရွယ်အစား D7.2cm * H9.1cm D8.2cm * H9.8cm D9cm * H11cm D10cm * H13cm
အရောင် အဖြူ၊ အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ အရောင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်တယ်
နောက်တစ်ခု: matted ဖန်ဗလာဗလာဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်သူ - ရှမ်ပိန် / အစိမ်းရောင်